lipsticks ezihlanzekile futhi balms zenzelwe anakekele obucayi lip isikhumba. Njengomthetho, ithuluzi ezifana isetshenziswa, kwabesilisa nabesifazane, ngisho nezingane imbala. Isikhumba sezindebe kuyinto ibuthaka futhi kudingeka ivikelwe unyaka wonke. Ukuphelelwa amanzi emzimbeni, amazinga aphakeme okushisa aphansi angalimaza ungqimba engenhla dermis, izoqala ukuba izinhlayiya zeqhwa futhi inqamuke. Lesi simo esiyingqayizivele sibangelwa kuyingozi ngoba ukutheleleka angangena microcracks sezindebe ke okwamanje iqala i ukuvuvukala, noma pops herpes. Potreskanye nezindebe ezomile bheka ugly kakhulu. Ngokuvamile, inkinga iba nzima ukwelapha kuka ukuvimbela ke okuningi. Yingakho dermatologists futhi beauticians ukutusa ukusetshenziswa lipsticks ezihlanzekile futhi balms ngesikhathi simo esishisayo amakhaza. Lokhu kuzokwenza ukuvikela izindebe zakho, uyobheka bephilile futhi kufanelekile.
"Belvedere" - chapstick, okungase thembeke ukuvikela izindebe ngasiphi isikhathi sonyaka. On ke, sizobe ukukhuluma.
Belweder - inkampani Polish ezisebenza emakethe iminyaka engaphezu kwengu-20. Uveza imikhiqizo yezimonyo yezokwelapha okusekelwe izithako zemvelo. Le brand ukhiqiza lenqwaba kakhulu imikhiqizo eliphezulu, okuyinto waqaphela kuphela inethiwekhi ekhemisi. Kuleli qophelo emhlabeni kukhona cishe akukho analogue izinkampani ezifana Belweder. brand izimonyo Original lokhu amelwe ibanga: lipstick ezihlanzekile futhi lip balms, eyiqinisa namafutha lacquers cuticle futhi Mascara based ukhilimu elwa namagciwane.
Ngamunye imikhiqizo eyenziwe high quality ochwepheshe emkhakheni we-biotechnology izingxenye esiyingqayizivele laboratories ekhethekile. Naphezu kweqiniso lokuthi sha kuyinto ngempela "abasha", uye sebevele sizibonakalisa phakathi abalandeli izimonyo wezokwelapha. Ngaphezu labo zinhlobo iluphi okuzoxoxwa ngalo ngezansi, futhi ethandwa kakhulu: namafutha lip kanye uwoyela orange futhi Vitamin C, lip namafutha nge umango kanye marula, lip namafutha ne black currant, shea ibhotela kanye Q10, kanye nezinye eziningi kuphumelele ngokufanayo . Kuyi-Internet ungathola ukubuyekezwa kanye ulwazi mayelana ngamunye izimali.
lipstick Avikelayo ne Aloe, vitamin E namafutha cottonseed
Lolu hlobo umkhiqizo senzelwe isikhumba esomile sezindebe (yobunzima wakhe esingokwemvelo, kome). Kuhle kakhulu ukusebenzisa ithuluzi at frost eqinile noma chapping. "Belvedere" (Chapstick zokuzivikela) iqukethe ukubunjwa yayo enhlaba juice, okuyinto regenerates futhi aphulukise ezilimele isikhumba, lanolin kanye ngengcina yezinyosi, okuyinto ukuvikela imiphumela emibi imvelo, kanye lamafutha ukotini imbewu futhi vitamin E ukuthuthukisa isikhumba ukuthungwa futhi ukwandisa yayo izakhiwo zokuzivikela.
ungathola lenqwaba nokubuyekezwa lo mkhiqizo ku izinsiza ahlukahlukene Inthanethi. Njengomthetho, amantombazane uthanda ngempela ukubheka izimonyo Belweder. Chapstick ne Aloe, vitamin E namafutha cottonseed ubhekana abangababi bemisebenzi yaso: inikeza isivikelo sezindebe ngesikhathi uhambo emakhazeni. Ngaphezu kwalokho, kwathiwa laphawula nokuthi leli aphulukise umkhiqizo ezilimele isikhumba futhi aphulukise amanxeba. Uma ithuluzi sisetshenziswa, isikhathi ngasinye imizuzu engu-15 ngaphambi kokuba aphume, izindebe silondoloze unomphela ukubukeka enempilo.
Lipstick amafutha isikhumba elangeni nge Vitamin E
Olunye uhlobo olukhulu izimonyo zemvelo kusukela inkampani "Belvedere" - chapstick, engesiyo kuphela moisturizes sezindebe, kodwa futhi uyabavikela abe emisebeni yama-UV, ukwakha mncane enamathela plenochkoj. izinsuku Zezıhlabane bangabalimata obucayi lip isikhumba, ke bomile, crack kanye ikhasi. Sun lipstick uwuvikela ukuguga ngaphambi kwesikhathi futhi ukulahlekelwa kuyaqina. Umkhiqizo akusho buthelela emzimbeni, ngakho-ke singasetshenziswa njalo ngemuva kwamahora amathathu noma uma kudingeka. Bottle kwaleli thuluzi emkhankasweni ebhishi kuyoba ithuluzi esisemqoka.
Lolu hlobo olusha ngokuphelele chapstick uye wakwazi ukubamba fancy abesifazane abaningi. Ithuluzi yakhiwa Ukwakheka peptides biomimetic - izinto kabani molecule labo abazokwazi sesibopho ukuthobisa ethize cell receptor futhi kuthinte isakhi sofuzo umbhalo. Ngamanye amazwi, umkhiqizo yezimonyo ngokuqinile "Belvedere" - chapstick ephakamisa - kusiza ukubuyisela lip ivolumu. It kuqinisa isikhumba, moisturizes ke, yenza kube bushelelezi kakhulu futhi nokunwebeka. isakhiwo Its futhi kuhlanganisa: uwoyela limnantes alba, moringa akhiphe Portulaca. Ukuhlenga wanika imiphumela ebonakalayo ngempela, kufanele usetshenziselwe okungenani inyanga. Njengomthetho, indlela yanconywa sigaba sobudala 30+.
Chapstick "Belvedere" ngamafutha rose
Izibuyekezo mayelana lo mkhiqizo lungatholwa kumawebhusayithi amaningi. Girls omaziyo owayeke abathenge lokhu lipstick ayikwazi wenqabe. Abaningi baye bame kwelokuthi lokhu iyona kuphela indlela ukuthi hhayi kuphela akakubangeli komzimba, kodwa owenza umsebenzi walo. Lolu hlobo lwe-makeup kahle waqhubeka izindebe ngaphandle kokudala ukungakhululeki. Kubalulekile ukuthi yokuhlanzeka "Belvedere" lipstick ne uwoyela rose ubukeka zemvelo kakhulu phezu izindebe, ayinayo pearl kanye okunamafutha.
Enye indlela ebalulekile kakhulu lapho ekhetha chapstick kuyinto ukunambitheka kwalo, ngoba njalo bazizwa emlonyeni ukunambitheka izimonyo kunalokho edabukisayo. Leli thuluzi likwazi nhlobo ukunambitheka unuke esondelene kakhulu iphunga okukhulu roses. Akufanele sibakhohlwe ukuthi ithuluzi esiphelele lip ukunakekelwa kumele kube compact, okwenza kube lula ukuba baphathe futhi zisebenzisa lapho kudingeka.
Lipstick zokuzivikela "Crystalline waxes" Aloe, bisabolol futhi camomile
Akuve inkampani yezimonyo in ethandwa "Belvedere" - chapstick, ukubuyekezwa zazo kuphela omuhle kakhulu. Into wukuthi kuba umkhiqizo kuphela eyenziwe i iresiphi ezintsha "Crystal wax." Lipstick ehlanganisa Aloe vera, chamomile, α-bisabolol ne vitamin E. Ngala izingxenye lip yezimonyo zivikela omiswe bese chapping, ukuzigcina uphilile.
Eshibhile noma ezibizayo
Njengazo zonke inkampani yezimonyo "Belvedere", chapstick, ngentengo kancane ngenhla Ngokwesilinganiso, iqukethe izithako zemvelo kuphela. Lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba ngezinye izikhathi kungcono overpay kancane bese uthola umkhiqizo izinga. Savings izimonyo yezokwelapha akuyona njalo nyama. Lipstick yokuhlanzeka "Belvedere» (Belweder) "Crystal Ingcina" has izibuyekezo omuhle kakhulu njengoba kuyintando hypoallergenic ngokuphelele futhi efanelekayo bonke abantu ngothi lwabo. Njengoba usuyitadishile imikhiqizo yalesi brand, singaphetha ngokuthi kuyinto ehluke ezishibhile. Yiqiniso, emashalofini zikhona izimali eshibhile, kodwa futhi ukwakheka kukhona kude zemvelo. Intengo kuziwa ruble 250 apiece.
Lip namafutha kanye melissa, green tea akhiphe propolis
Ithuluzi yakhelwe isivikelo sezindebe kusuka iphele ukuphuma. It is esikuthola kalula, ke moisturizes futhi ithambisa isikhumba sezindebe, futhi kuvimbela imiphumela emibi emvelweni (emoyeni, emakhazeni, ilanga, emoyeni elomile). Green tea akhiphe has ukuphulukiswa futhi izakhiwo eqeda ukuvuvukala, ke moisturises futhi ivikela isikhumba iphele ukuphuma. Yiziphi ezinye izingxenye iqukethe "Belvedere" (chapstick)? Ukubunjwa thuluzi futhi ahlanganiswe vitamin E kanye propolis. Lesi sakamuva kunomphumela amagciwane futhi kuvimbela ukuthuthukiswa izifo ezahlukene isikhumba izindebe.
Amafutha, umbala lip aphilisayo (SPF 10)
Lo mkhiqizo ezihlukahlukene ocebile kakhulu amavithamini namaminerali. Phakathi izingxenye zalo, zikhona amavithamini E, C no-D, beta-carotene, acid okunamafutha ehlukahlukene (linoleic, palmitic, stearic). Ithuluzi kunikeza izindebe zakho ukukhanya yemvelo luhlaza pink. Ibhalsamu, aphilisayo umbala lip SPF 10 ivikela izindebe isikhumba ekulimaleni ilanga, kuthuthukisa izicubu kuyaqina, ithambisa futhi smoothes dermis olubucayi. Kunconywe ukusetshenziswa ngesikhathi namandla elangeni. Uphenyo chapstick Belweder zilwane nhlobonhlobo. Njengomthetho, amantombazane ukuthi kubaluleke ngempela umsebenzi walo futhi isikhumba izindebe ehlobo obukeka engumqemane kakhulu futhi fresh.
Khuluma mayelana nomklamo
Emantombazaneni ukubonakala imikhiqizo yezimonyo akuyona ukubaluleka kokugcina. Yiqiniso, Kuhlale kumnandi ubambe ezandleni zabo ibhodlela nge design esiyingqayizivele, ngoba unake kanye nozakwabo, nabangane. Chapstick "Belvedere", izinhlobo zazo yetfulwe izixazululo ezahlukene ngokuphelele creative, akabashiyi ubani nandaba. Amanye amathuluzi, ezifana "Crystalline waxes" noma "C rose uwoyela", kukhona ngesimo lipstick.
Bottle eyenziwe ngepulasitiki esobala, okuvumela ukuba ahlole, kungabikho ovulayo, njengoba izimali namanje kwesokunxele. Kolunye uhlangothi isinciphisi itholakala uma sehliselwe phansi lipstick ngokwayo ihamba phezulu. Kuyinto elula kakhulu ukuthi azikho ezingadingekile design caps kanye nokuvula akudingeki ukuthi wenze noma yiziphi ukunyakaza ezingadingekile.
Izindebe balms, okuyinto eyenza lokhu brand sizobukeka sihlukile. Ibhokisi ithuluzi yakhelwe njengendlela ibhola. Ngaphakathi, kukhona izindlela ngesimo Isigaxa, futhi phezulu unamathele nesivalo esobala. Balms ukusetshenziswa futhi elula kakhulu. Ziyakwazi compact, futhi ihlala isikhathi eside.
Lapho ukuthenga amathuluzi Belweder
Amantombazane amaningi, ngemva kokufunda ukubuyekezwa emangalisayo ngalokhu brand, ukushesha esitolo beyofuna chapstick. Noma kunjalo, oyodumazeka, ngoba akekho kithi asipheli. Ngakho kuphi sithola ithuluzi ezifana Chapstick "Belvedere"? Thenga ekhemisi - konke silula. Njengoba lokhu inkampani eyenza izimonyo zezokwelapha izithako zemvelo, imikhiqizo yayo zingatholakala emashalofini Pharmacy.
Hhayi imizi ngemizi, ngeshwa ngisho kunodokotela zingatholakala brand "Belvedere". Kulokhu, inkampani ine website esemthethweni, lapho ungakwazi oda imikhiqizo oyifunayo. Futhi, wonke amazwe kukhona wabenza namawebhusayithi abo esemthethweni enikeza uhla oluphelele imikhiqizo. Ngakho, ukuthenga chapstick kungabi nzima ukwenza lokhu.
Cream "Gypsy": ukwakheka kanye indlela yokusetshenziswa, ngempela